Ukubuyekezwa Kwe-Psychic Access - Ukufundwa kwengqondo okuku-inthanethi
Ukufundwa kwengqondo ku-intanethi > Ukubuyekezwa kokufinyelela kwe-Psychic
Ukubukeza Ukufinyelela Kokufinyelela Kwe-Psychic
Ukufinyelela kwe-Psychic ingenye yamanethiwekhi amasha we-Psychic amasha, angaziwa kakhulu kepha kufanele ngithi ahle kakhulu. Zingezabo, futhi ziqhutshwa yi-psychic edumile yomhlaba iDougC. Ukufinyelela kwe-Psychic kunikela ngezindlela eziningana zokufinyelela kubeluleki be-Psychic bangempela kufaka phakathi ukufundwa kwe-web cam bukhoma, ukufundwa kwe-imeyili, kanye nezindawo zokuxoxa zamahhala. Yonke i-psychic eqashwe yi-Psychic Access ihlolwe kanzima ukuze iqiniseke ukuthi ingumeluleki oyiqiniso wePsychic. Kuqashwa kuphela abafaka izicelo ezi-5% kwi-Psychic Access. Banikeza nesiqinisekiso sokwaneliseka esingu-100% uma ungajabuli ngokufunda kwakho.
Ukufinyelela kwe-Psychic yasungulwa ku-2005, yi-psychic ehlonishwe kahle ehamba nge-DougC enegama elibi. Ngisho noma le nkampani ingu-4 ubudala ubudala baye bafakazela ukuthi ikhasimende liza kuqala. Kuze kube yilolu suku i-Psychic Access iphethwe futhi iqhutshwa yi-Psychic yeqiniso. Inqubo yabo yokuhlola ukuhlolwa kwengqondo ihambisana noMthombo We-Psychic.
Ukuhlola Ukuqagela Kwezingqondo
Ukufinyelela kwe-Psychic ungomunye wamanethiwekhi wami angintandokazi yengqondo ngoba anenqubo yokucubungula kakhulu. I-psychic ngayinye esebenza ku-Psychic Access ibuzwa ngokuqondile ngumnikazi ongumeluleki we-psychic owaziwayo. Lokho ngempela into oyitholayo lapho wenza ibhizinisi ngebhizinisi elincane elizimele. Ngaphandle komthombo we-Psychic, Ukufinyelela kwe-Psychic inezinqubo ezinhle kakhulu zokuxoxisana ngengqondo kunoma yikuphi.
Iwebhusayithi Yokufinyelela Ye-Psychic
The Ukufinyelela kwe-Psychic iwebhusayithi ilula kakhulu ukuyisebenzisa, futhi ibekwe kahle. Akusihle njengamanye amasevisi we-psychic, kepha kusebenza ngokumangalisayo. Ungathenga amaminithi ngqo kusuka kuwebhusayithi, uhlele ukufundwa kwengqondo, futhi uxhumane nokwesekwa kwamakhasimende konke usebenzisa ukungena kwakho ngemvume kuwebhusayithi. Noma ingeyinhle bekushesha kakhulu futhi kulula ukuyisebenzisa kuwo wonke amanethiwekhi engqondo engiwasebenzisayo.
Ukufinyelela kwe-Psychic inesivumelwano esihle kakhulu samakhasimende amasha. Lapho uthenga, uzothola imizuzu eyi-6 mahhala. Ungasebenzisa imizuzu ingxoxo, ifoni noma i-webcam yokufunda ngemilingo nganoma iyiphi i-psychic eku-inthanethi. Imizuzu eyengeziwe mihle ikakhulukazi uma usesabelomali noma uma ubuza okufushane kakhulu okulula kakhulu ukuphendula imibuzo.
Ngihlale ngithokozile Ukufinyelela kwe-Psychic'umnyango wamakhasimende. Banikezela ngosizo lwefoni ngezikhathi ezijwayelekile zebhizinisi, nangezimpelasonto. Ukuxhaswa kwe-imeyili kuyatholakala 24 × 7. Ngangihlala ngithola ukuhlonipha kwabo kwamakhasimende, futhi ngiyashesha izikhathi ezimbalwa lapho ngisebenzise khona.